Thursday October 31, 2019 - 18:49:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay Ururka Daacish ayuu ku xaqiijiyay in weerar ka dhacay dalka Suuriya lagu dilay hoggaamiyihii Ururka iyo kaaliyihiisi ahaana Afhayeenkii Ururka.
Sawir hore Hoggaamiyihii Daacish
Farriin cod ah oo Daacish ay ku baahisay baraha Internetka ayay ku sheegtay in ladilay Abuubakar Al Baqdaadi oo muddo sanada ah Ururka hoggaamiye u ahaa iyo Abu Xasan Al Muhaajir oo ahaa Afhayeenkii Ururka iyo kaaliyihii Al Baqdaadi.
Kalimad soconaysay muddo todobo daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayuu Afhayeenka cusub ee Ururka ku sheegay in hoggaamiyaha cusub ee Daacish laga dhigay nin lagu magacaabo Abuu Ibraahiim.
Maalintii Axadda oo ku beegneed 27 October 2019 ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay in weerar ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya ay ciidamadiisu ku dileen Hoggaamiyihii Daacish.
Weerar kale oo isla maalintii Axadda ka dhacay gobolka Xalab waxaa lagu dilay Abul Xasan Al Muhaajir oo ahaa afhayeenkii kooxda iyo ku xigeenkii Al Baqdaadi, duqeyn ka dhacday duleedka magaalada Jaraabulis oo ay maamulaan kooxaha mucaaradka ayaa lagu beegsaday gaari booyad ah oo uu isku dhax qarinayay Afhayeenka ladilay.
Maleeshiyaadka Malaaxidada Kurdiyiinta oo taageero xagga cirka ah ka helaya Mareykanka ayaa dagaal kula wareegay dhammaan dhulkii ballaarnaa ee Kooxda Daacish ay ka maamulaysay wadanka Suuriya halka ciidamad xukuumadda Ciraaq iyo Maleeshiyaad Shiico ah ay horay uqabsadeen deegaannadii Daacish ka maamulaysay dhulka labada Wabi ee Ciraaq.
Sanaddii 2014 ayuu Abuubakar Al Baqdaadi isku magacaabay Khaliifka muslimiinta wixii xilligaas ka dambeeyay ayay jamaacadiisu dagaallo culus dalka Suuriya kula gashay jamaacaad jihaadi ah kadib markii ay gaalnimo ku xukuntay.
Wixii xilligaas ka dambeeyay ayay kooxdu dhax muquuranaysay gibi dhaclayn dhanka Manhajka iyo maamulka ah waxaana fashilmay isku daygii kooxda ee ahaa in ay burburiso jamaacaadka jihaadka caalamiga ah kula jira Mareykanka iyo xulufadiisa iyadoo boor isku qaris uga dhiganaysa in ay tahay khilaafo.